ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆံပင်ဖြူကြတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ ? ? ? – Tameelay
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆံပင်ဖြူကြတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ ? ? ?
လူတွေမှာ ဆံပင်ဖြူတယ်ဆိုတာ သဘာဝပါပဲ။ အသက်ကြီးလာရင် ဆံပင်ဖြူမယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အသက်က ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဆံပင်ဖြူတွေရှိနေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ဒီလိုငယ်ရွယ်တုန်းအချိန်မှာ ဆံပင်ဖြူတွေရှိလာတာကို အရွယ်မတိုင်မီ ဆံပင်ဖြူခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ သဘာဝအတိုင်းမဟုတ်တော့တာကြောင့် ဆေးပညာအရ သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဆံပင်ဖြူရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အစားအစာ၊ ဆံသားထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းမမှန်တာစတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတချိုကြောင့်လည်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဆံပင်ဖြူစေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတွေကတော့ ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့မှု၊ဟော်မုန်းမညီမျှမှုနဲ့ အရွယ်မတိုင်မီသွေးဆုံးခြင်း တို့ပါဝင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ (ဆံပင်ကိုအနက်ရောင်ဖြစ်စေတဲ့) melanin pigment ပုံမှန်ပမာဏလောက်ကို ပေါင်းစပ်ဓာတ်ပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်က ကျဆင်းလာပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်ပဲ ဖြူလွလွ ဆံနွယ်တွေ ဖြစ်လာရတာပေါ့။
ဒီတော့ ဒီလို ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲဖြူလာရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသိထားမှ သင့်တော်တဲ့ ကုသထိန်းသိမ်းမှုကိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဆံပင်ဖြူနေပြီဆိုရင် ကိုယ့်မှာရှိနေနိင်လောက်တဲ့ အောက်ပါအချက်တွေကို သတိထားပါ။
ဆံပင်ဖြူရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကတစ်ခုက သိုင်းရွိုက်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများလွန်းတာ ဒါမှမဟုတ် နည်းလွန်းတာတွေက ဆံသားအတွင်း melanin ထွက်ရှိမှုကို ထိခိုက်စေပြီး အရွယ်မတိုင်မီ ဆံပင်ဖြူခြင်းကို ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
B12 ဓာတ်ချို့တဲ့ရင် ငယ်ရွယ်စဉ်မှာဆံပင်ဖြူနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် B12 ၊ ဇင့်နဲ့ကော့ပါးတို့က ဆံသားအားဖြည့်ပေးတဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်တာကြောင့် B12 ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေကို နေ့စဉ်အာဟာရမှာ အမြဲထည့်စားပါ။
မိဘတွေမှာ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဆံပင်ဖြူရှိခဲ့ဖူးရင် မွေးလာတဲ့သားသမီးမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ဖို့ ပိုများပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဗီတာမင် C နဲ့ E ချို့တဲ့နေရင်လည်း ဆံပင်ဖြူလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုချို့တဲ့ရင် melanin ထုတ်ပေးတဲ့ဆဲလ်တွေရဲ့ပမာဏကို လျော့နည်းစေပြီး ဆံပင်ဖြူလာစေပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဆံပင်ဖြူစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အခါ သောက်သုံးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ free radicals ဓာတ်တွေထွက်ရှိစေပြီး melanin ကိုလျော့နည်းစေပါတယ်။
အသင့်အလွယ်စားအစားအစာတွေက အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ဆံပင်ဖြူစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသင့်စား သို့မဟုတ် ပြုပြင်စီမံထားတဲ့အစားအစာတွေဟာ ဆံသားအတွင်းက melanin ဓာတ်ကို လျော့နည်းစေပြီး အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို မြန်ဆန် စေပါတယ်။ ဒီအစားအစာတွေကို ကြာရှည်စွဲမြဲစားသုံးသူတွေဟာ အရွယ်မတိုင်မီ ဆံပင်ဖြူလာဖို့များပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုက လူကိုထိခိုက်မှုများစွာဖြစ်လာစေနိုင်ပြီး စိတ်တုန်လှုပ်ခြင်း၊ဝမ်းနည်းခြင်း၊စိတ်ပူပန်ခြင်းတို့က melanin ဆဲလ်တွေကို ပမာဏလျော့စေပြီး ငယ်ငယ်နဲ့ဆံပင်ဖြူလာစေပါတယ်။
ဘာလို့ ဆံပင်ဖြူတွေတွေ့နေရလဲ။ အာဟာရမညီမျှတဲ့စားသောက်ပုံအလေ့အထရှိရင် ချို့တဲ့နေတဲ့အာဟာရတွေလည်း အများကြီးရှိမှာပါပဲ။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်က ဗီတာမင်နဲ့သတ္ထုဓာတ်အလုံအလောက်မရနိုင်တဲ့အခါ လုပ်ဆောင်ချက်တွေချို့ယွင်းလာတတ်တာကြောင့် ဆံပင်ဖြူတာ အပါအဝင် တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေပါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုအသုံးများခြင်းက ဆံသားကို အားနည်းစေပါတယ်။ ဒီစက်တွေကနေထွက်ရှိလာတဲ့ အပူရှိန်က melanin ထွက်ရှိမှုကို ထိခိုက်စေပြီး ဆံပင်ဖြူလာစေနိုင်ပါတယ်။
တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ဦးရေပြားမသန့်ရှင်းမှုကလည်း အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ကို ဂရုမစိုက်ရင်တော့ ဆံပင်ကဖြူလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မကြာခဏဆံပင်ဆိုးရင် ဆံသားပျက်စီးစေနိင်ပါတယ်။ ဒီဆိုးဆေးတွေမှာ ဓာတ်တုပစ္စည်းတွေပါဝင်တာကြောင့် melanin ဆဲလ်တွေ ကိုလည်းပျက်စိးစေနိုင်ပါတယ်.
ဖောလစ်အက်စစ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတော်များများအတွက် မရှိမဖြစ်ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သူချို့တဲ့ပြီဆိုရင် ဆံပင်သန်စွမ်းမှုကိုနှေးကွေးစေနိုင်ရုံမက ဆံပင်ပါဖြူစေပါတယ်။
ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဆံပင်ဖြူလာမှာကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ?
၄) သိုင်းရွိုက်အခြေအနေကို ဆန်းစစ်ပါ
၆) ဆံပင်ကို ဆီလိမ်းပါ။
၇) ရေမွှေးပါတဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီတွေကိုရှောင်ပါ။
ဗာဒံစေ့အပါအဝင် အစေ့အဆံတွေကို စားသုံးပေးရင် ဆံပင်ဖြူခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ချောကလက်၊ ငှက်ပျောသီး၊ ဗာဒံစေ့တို့ကို ဖျော်သောက်ပေးရင် ဆံပင်နဲ့ အရေပြားကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါတယ်။
Hello Health Group သည် ဆေးပညာအကြံပြုချက်များ၊ရောဂါရှာဖွေအတည်ပြုချက်များနှင့် ကုသမှုများမပြုလုပ်ပေးပါ။
လူတှမှော ဆံပငျဖွူတယျဆိုတာ သဘာဝပါပဲ။ အသကျကွီးလာရငျ ဆံပငျဖွူမယျလေ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့အသကျက ငယျငယျလေးနဲ့ ဆံပငျဖွူတှရှေိနရေငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ။
ဒီလိုငယျရှယျတုနျးအခြိနျမှာ ဆံပငျဖွူတှရှေိလာတာကို အရှယျမတိုငျမီ ဆံပငျဖွူခွငျးလို့ချေါပါတယျ။ သဘာဝအတိုငျးမဟုတျတော့တာကွောငျ့ ဆေးပညာအရ သိထားသငျ့တဲ့အခကျြတှကေို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။ ဆံပငျဖွူရခွငျးအကွောငျးရငျးတှကေအမြားကွီးရှိပါတယျ။ ဆေးလိပျသောကျခွငျး၊ အစားအစာ၊ ဆံသားထိနျးသိမျးမှုနညျးလမျးမမှနျတာစတဲ့ နထေိုငျမှုပုံစံတခြိုကွောငျ့လညျး ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ဆံပငျဖွူစနေိုငျပါတယျ။ နောကျထပျအကွောငျးရငျးတှကေတော့ ဗီတာမငျ B12 ခြို့တဲ့မှု၊ဟျောမုနျးမညီမြှမှုနဲ့ အရှယျမတိုငျမီသှေးဆုံးခွငျး တို့ပါဝငျပါတယျ။ လူတဈယောကျဟာ အသကျကွီးလာတာနဲ့အမြှ (ဆံပငျကိုအနကျရောငျဖွဈစတေဲ့) melanin pigment ပုံမှနျပမာဏလောကျကို ပေါငျးစပျဓာတျပွုနိုငျတဲ့စှမျးရညျက ကဆြငျးလာပါတယျ။ဒါ့ကွောငျ့ပဲ ဖွူလှလှ ဆံနှယျတှေ ဖွဈလာရတာပေါ့။
ဒီတော့ ဒီလို ပုံမှနျမဟုတျဘဲဖွူလာရတဲ့အကွောငျးရငျးတှကေိုသိထားမှ သငျ့တျောတဲ့ ကုသထိနျးသိမျးမှုကိုလုပျနိုငျမှာဖွဈလို့ အသကျငယျငယျနဲ့ဆံပငျဖွူနပွေီဆိုရငျ ကိုယျ့မှာရှိနနေိငျလောကျတဲ့ အောကျပါအခကျြတှကေို သတိထားပါ။
ဆေးလိပျသောကျခွငျးဟာ အသကျငယျငယျနဲ့ဆံပငျဖွူစတေဲ့အကွောငျးရငျးတှထေဲကတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဆေးလိပျသောကျတဲ့အခါ သောကျသုံးသူရဲ့ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ free radicals ဓာတျတှထှေကျရှိစပွေီး melanin ကိုလြော့နညျးစပေါတယျ။
အသငျ့အလှယျစားအစားအစာတှကေ အသကျငယျရှယျစဉျမှာ ဆံပငျဖွူစတေဲ့အကွောငျးရငျးတှထေဲက တဈခုဖွဈပါတယျ။ အသငျ့စား သို့မဟုတျ ပွုပွငျစီမံထားတဲ့အစားအစာတှဟော ဆံသားအတှငျးက melanin ဓာတျကို လြော့နညျးစပွေီး အိုမငျးရငျ့ရျောမှုကို မွနျဆနျ စပေါတယျ။ ဒီအစားအစာတှကေို ကွာရှညျစှဲမွဲစားသုံးသူတှဟော အရှယျမတိုငျမီ ဆံပငျဖွူလာဖို့မြားပါတယျ။
စိတျဖိစီးမှုက လူကိုထိခိုကျမှုမြားစှာဖွဈလာစနေိုငျပွီး စိတျတုနျလှုပျခွငျး၊ဝမျးနညျးခွငျး၊စိတျပူပနျခွငျးတို့က melanin ဆဲလျတှကေို ပမာဏလြော့စပွေီး ငယျငယျနဲ့ဆံပငျဖွူလာစပေါတယျ။
ဘာလို့ ဆံပငျဖွူတှတှေနေ့ရေလဲ။ အာဟာရမညီမြှတဲ့စားသောကျပုံအလအေ့ထရှိရငျ ခြို့တဲ့နတေဲ့အာဟာရတှလေညျး အမြားကွီးရှိမှာပါပဲ။ ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျက ဗီတာမငျနဲ့သတ်ထုဓာတျအလုံအလောကျမရနိုငျတဲ့အခါ လုပျဆောငျခကျြတှခြေို့ယှငျးလာတတျတာကွောငျ့ ဆံပငျဖွူတာ အပါအဝငျ တခွားကနျြးမာရေးပွဿနာတှပေါဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
မကွာခဏဆံပငျဆိုးရငျ ဆံသားပကျြစီးစနေိငျပါတယျ။ ဒီဆိုးဆေးတှမှော ဓာတျတုပစ်စညျးတှပေါဝငျတာကွောငျ့ melanin ဆဲလျတှေ ကိုလညျးပကျြစိးစနေိုငျပါတယျ.
၄) သိုငျးရှိုကျအခွအေနကေို ဆနျးစဈပါ
၆) ဆံပငျကို ဆီလိမျးပါ။
၇) ရမှေေးပါတဲ့ ခေါငျးလိမျးဆီတှကေိုရှောငျပါ။
Credit : ဖိုးသူတျော
လက်သည်းခွံပေါ်က အဖြူရောင်လခြမ်းလေးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ် သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေကို ကြည့်တဲ့အခါ လက်သည်းခွံအရင်းနေရာကနေ ထွက်လာတဲ့ အဖြူရောင် လခြမ်းသဏ္ဍန်လေးတွေကို သတိပြုမိပါသလား။ တကယ်တော့ ဒီလခြမ်းလေးတွေက လက်သည်းရဲ့ အရမ်းကို အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက လက်သည်းမှာပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုတာထက် ပိုပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဒီလခြမ်းလေးတွေကတဆင့် သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို …
အမျိုးသမီးများ သားအိမ်ကင်ဆာ အတွက်ဆေးကောင်းတစ်လက်
အမျိုးသမီးများ သားအိမ်ကင်ဆာ အတွက်ဆေးကောင်းတစ်လက် ဆေးရုံက လက်လွှတ်လို့ အိမ်ပြန်ခေါ်လာတဲ့ လူနာတွေကို မြန်မာဆေးမီးတိုနဲ့ ကုခါမှ အမြစ်ပြတ် ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာတွေ မကြာခဏကြားဖူးပါတယ်။ခုတစ်ခါလည်း တွေ့ပြန်ပါပြီ၊ သားအိမ်ကင် ဆာဖြစ်လို့ ဆေးရုံက လက်လွှတ်တဲ့ လူနာတဲ့။ မြန်မာဆေးမီးတိုနဲ့ ကုလိုက်တာ ကောင်းသွားပြီတဲ့။ လူနာကလည်း ကျွန်တော်တို့ ဝင်းထဲမှာဆိုတော့ သွားမေးဖြစ်ပါတယ်။ …
လူမမြင်နိုင်ပေမဲ့ အတွင်းသား အသားအရေ ဖြူဝင်းစေဖို့ လိမ္မော်ရည်နဲ့ နနွင်းမှုန့်
နနွင်းဟာ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး အသားအရေကို ဖြူဝင်းစေတဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တစ်ခုပါ။ လိမ္မော်သီးမှာလည်း ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အပြင် Citric အက်ဆစ်ဓါတ်တွေပါဝင်လို့ အသားအရေကို သန့်စင်ပေးနိုင်ပြီး ဖြူဝင်းစေပါတယ်။ အတွင်းသားအသားအရေပျက်ဆီးတာဟာ လူမမြင်ရဘူးဆိုပေမဲ့လည်း ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ အသားအရေကို အကောင်းဆုံးဂရုစိုက်ချင်ကြတာဖြစ်လို့ အတွင်းသားအသားအရေ ညိုမဲနေတာတွေဟာ တကယ့်ပြဿနာအကြီးကြီးပါပဲ။ …